Jwxo-shiil, oo Wadna Xanuun ku Soo Booday [heart attack] – Rasaasa News
War Deg Deg ah oo dhiil xambaarsan ayaa waxaa na soo gaadhsiiyey qaar ka mid xubno ka tirsan CWXO, oo jooga dalka Eritrea, dadkan oo ku soo booqday Jwxo-shiil Isbitaalka la dhigay, ayaa sheegay in uu ku jiro xaalad KOOMO ah .
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Caasmara ayaa waxay sheegayaan in Jwxo-shiil uu ku soo booday Wadana xanuun habeenkii xalay ahaa, haatana uu Isbitaal ku jiro isaga oo miyir la,a tan iyo habeenkii xalay ahaa ayaan wax dhaqdhaqaaq ah lagu haynin.
Xaalada Jwxo-shiil, ayaa sida ay takhaatiirtu sheegayaan aad u liidata, waxaan laga dayrinayaa in ay adag tahay in uu ka soo laabto wadna xanuunka ku dhacay habeenkii xalay ahaa. Dhakhaatiirtu waxaa ay sheegayaan in hal dhinac uu mayd yahay, xanuunka wadnaha ee ku dhacay Jwxo-shiil, ayaa badanaaba ay adag tahay in dadka da,a ahi ay ka samato kacaan.
Hadiiba ay suurto gasho in uu ka badbaado geeri ayaa waxaan laga sugaynin in uu dib oo dambe u hadlo ama uu u noqdo ruux dhimirkiisu taam yahay.
Afada, Jwxo-shiil, ayaa waxaa ay doonaysaa in todobaadkan gudihiisa ay u dhoofto caasimada Eritariya, hadii ay nasiib u hesho in ay ku gaadho isaga oo ay naf ku jirto.
Wixii war ah ee ka soo kordha waxaad kala socon kartaan rasaas.com